EURO 2016: Wales oo guul ka gaaray Slovakia…(Gareth Bale iyo xulkiisa Wales oo rikoodh dhigay)+SAWIRRO – Gool FM
EURO 2016: Wales oo guul ka gaaray Slovakia…(Gareth Bale iyo xulkiisa Wales oo rikoodh dhigay)+SAWIRRO
Byare June 11, 2016
(France) 11 Juunyo 2016. Xulka Wales ayaa guul ku furtay Euro 2016 kaddib guul dadaal loo galay ay ka gaareen xulka Slovakia oo ay kaga adkaadeen 2-1.
Qeybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 1-0 oo uu ku hogaaminayo xulka Wales.
Xiddiga indhaha u ah ee Gareth bale ayaa daqiiqadii 10-aad hogaanka u dhiibay xulkiisa kaddib laadka xorta oo toos ah uu dhex dhigay shabaqa.
Wuxuu noqday Bale laacibkii ugu horeeyay ee British oo laadka xorta oo toos ah ka dhaliya Euro wuxuu sidoo kale dhaliyay laadka xorta ah kulankiisii ugu horreeyay ee xulka Wales wuxuu ka dhaliyay isla xulkan Slovakia October 2006.
Markii la isku soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta xulka Slovakia oo dadaal kii hore ka fiican la yimid ayaa goolka iska soo guday oo waxaa u dhaliya Ondrej Duda kubbad uu laad taraarax goosha dhex dhigay daqiiqadii 61-aad.
Xulka Slovakia ayaa qeybahan dambe u muuqday mid yare fir fircoon laakiin Wales ayaa ka heshay goolka guusha Hal Robson-Kanu oo badel ku soo galay ciyaarta daqiiqadii 81-aad kaddib markii uu horey u laaday laad sahlan kubbad uu doonayay inuu gooyo Aaron Ramsey oo ka dheeraatay.
Slovakia ayaa isku dayday inay iska soo gudo goolka iyadoo birta ku soo dhufatay kubbad ay madaxa galeen balse ma aysan u suuro galin, Bale ayaa sidoo kale labo kubbadood la orday oo weerar rogaal celis ahaa laakiin meel fiican kuma aysan dhammaan.
Xulka Wales ayaa noqday xulkii ugu horeeyay oo British oo guul gaara kulankooda furitaanka Euro, Engaland (8-jeer) Scotland (2-jeer) markasta waa laga badinayay.
Shaxda Rasmiga ah ee England vs Russia...(Kane oo horey hogaaminaya iyo Vardy oo lagu cabay)
GOOGOOSKA: England vs Russia 1-1 (Ingiriiska oo aan abid badin ciyaar-bilow Euro ah)